ချစ်ရတဲ့ သားလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ငယ်စဉ်က အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖေဖေဟဲလေး(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ) – Shan Ma Lay
ချစ်ရတဲ့ သားလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ငယ်စဉ်က အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖေဖေဟဲလေး(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on ချစ်ရတဲ့ သားလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ငယ်စဉ်က အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖေဖေဟဲလေး(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟဲလေးကတော့ လက်ရှိမှာလည်း ဂီ တလော ကမှာ
နေရာ တစ်နေရာကနေ ရပ်တည်နေပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်
ဟဲလေးရဲ့ အရင်တုန်းက သီချင်းလေးတွေကလည်း ယနေ့အချိန် ရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟဲလေးရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းကလည်း ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သလိုပရိသတ်အခိုင်အမာကိုရရှိထားကာ လက်ရှိမှာလည်း အောင်မြင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အေးချမ်းသာယာတဲ့ မိသားစု လေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကာရိုးရှင်းတဲ့ ဘဝလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်နာရီပိုင်းလောက်က သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက် မှာ
ချစ်ရတဲ့ သာလေးရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။ငယ်စဉ်က အမှတ် တရ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ Happy 11th Birthday ဖေဖေ့ချစ်သားကြီး သားသားဟဲကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေ လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေ
အိမ်ထဲနေရင်းလူပျိူပေါက်လေးဖြစ်လာပြီ ဆိုပြီး ရေးသားထားရာပရိသတ်ကြီးအတွက်ဖော်ပြပေးရင်း သားသားလည်းမွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ချစ်ရတဲ့ သားလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ငယ်စဉ်က အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖေဖေဟဲလေးနိုင်ငံကျော် တေးသံရှင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟဲလေးကတော့ လက်ရှိမှာလည်း ဂီ တလော ကမှာနေရာ တစ်နေရာကနေ ရပ်တည်နေပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟဲလေးရဲ့ အရင်တုန်းက သီချင်းလေးတွေကလည်း ယနေ့အချိန် ရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဟဲလေးရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းကလည်း ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သလို ပရိသတ်အခိုင်အမာကိုရရှိထားကာ လက်ရှိမှာလည်း အောင်မြင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အေးချမ်းသာယာတဲ့ မိသားစု လေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ရိုးရှင်းတဲ့ ဘဝလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်နာရီပိုင်းလောက်က သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက် မှာ ချစ်ရတဲ့ သာလေးရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။
ငယ်စဉ်က အမှတ် တရ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ Happy 11th Birthday ဖေဖေ့ချစ်သားကြီး သားသားဟဲကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေ လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေ အိမ်ထဲနေရင်းလူပျိူပေါက်လေးဖြစ်လာပြီ ဆိုပြီး ရေးသားထားရာပရိသတ်ကြီးအတွက်ဖော်ပြပေးရင်း သားသားလည်းမွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ငှက်ပျောပင်ရောင်းမယ်လို့ အာဏာာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ကြေညာ(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
မိမိုက်လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ပုရိသတွေကြွေသွားစေမယ့် လုလုအောင် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတော်တော် များများမှာဝတ်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ရိုက် ကူးခဲ့တဲ့ ဖလက်ရှ် (FLASH)ကုတ် အင်္ကျီလေးကို လေလံတင် ရောင်းချပြီး ရဲတိုက်ကိုကူညီ ပေးမယ့်….
June 7, 2021 aung aung
ပုရိသတွေ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းအောင် အမိုက်စား ဖြစ် နေတဲ့ ရွှေဘုံ ရဲ့ ဗီဒီယို
နန်းသီရီမောင်ရဲ့ ဆွဲမက်စရာ ပုံရိပ်လေးများ……. July 24, 2021
နာမည်ကြီး မော်ဒယ်မလေး၏ အသံကြောင့် …ကိုသိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးမှ အမျိုးသားထုကြီး ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရသည့်အဖြစ်… July 24, 2021
မတ်မတ်သင်ဇာရဲ. အကြမ်းစားပုံများ… July 24, 2021
ဖျားတာ ၉ ရက်မြောက်နေ့ ဒီနေ့ အနံ့ရော အရသာ‌ရော ပြန်ရနေ့ပြီ ဟု‌ပြောလာပြီး ကိတ်လွန်း နေတဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်.. July 24, 2021
ေအာက္ဆီဂ်င္အိုးေတြခ်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကားကိုခို.းယူေမာ.င္းေျပ.းသြားလို႔ျပည္သူမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံလာရွာတဲ့ ႏြယ္ဒါလီထြန္း July 24, 2021
မအလ သိဖို့ ဒဲ့ ပြောလိုက်ပြီ